नमोबुद्धका किसानलाई अनुदानमा भैंसी वितरण – Sourya Online
नमोबुद्धका किसानलाई अनुदानमा भैंसी वितरण
शुकदेव थपलिया २०७८ जेठ २८ गते १८:३४ मा प्रकाशित
दाप्चा । नमोबुद्ध नगरपालिकाले व्यवसायिक पशुपालनमा किसानलाई आकर्षित गर्न र किसानको आयस्तर वृद्धि गर्न अनुदानमा उन्नत जातको भैंसी वितरण कार्य सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले शुक्रबार वडा नं. १० बाट किसानलाई भैंसी वितरण कार्यको सुरुवात गरेको हो । शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा वडा नं. १० का ५५ जना पशुपालक किसानलाई थोरे भैंसी वितरण गरिएको छ ।
किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदानमा भैसी वितरण गरिएको हो । नमोबुद्ध नगरपालिकाका नगरप्रमुख टिपी शर्मा तिमल्सिनाले चुनावी प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा कृषि र पशुपालनमा नगरका किसानलाई व्यवसायिक बनाउन र किसानको आयस्तरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको बताए ।
नगरप्रमुख तिमल्सिनाका अनुसार दूधमा आत्मनिर्भर बनिसकेको नगरपालिकामा पशुपालनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन अनुदानमा भैंसी वितरणको कार्य सुरु गरिएको हो । उनका अनुसार यही आर्थिक वर्षमा अनुदानमै नगरका किसानका लागि उन्नत जातका बाख्रा वितरणको कार्यसमेत हुँदैछ । यसका लागि बाख्रा खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको तिमल्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।
शुक्रबार वडा नं. १० को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेल, वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका कृषि समिति संयोजक मेलवहादुर लामा, वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी, नगरपालिकाको पशु विकास शाखाका प्रमुख चिरञ्जिवी शर्मा लगायतले किसानलाई भैंसी वितरण गर्दै अभियानको सुरुवात गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलले यस वर्षबाट सुरु भएको भैंसी वितरण कार्यक्रमलाई आगमी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने बताए । उनले नगरभरिका किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सुरु गरिएको पनि जानकारी दिए । अनुदानमा वितरण गरिएको सबै भैंसीको बीमासमेत गरिएको उनले बताए ।
यस्तै वडा नं. ९ का अध्यक्ष मेलवहादुर लामाले नगरपालिकाले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि विगतदेखि नै कार्य गर्दै आएको र त्यसैको निरन्तरतास्वरुप यस वर्षदेखि उन्नत जातका भैसी वितरण गर्न थालिएको बताए । नगरमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि थय कार्ययोजनासमेत बनाइएको उनले बताए ।
वडा नं. १० का अध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले वडामा वितरण गरिएका भैंसीमध्ये सबैभन्दा पहिला सुत्केरी हुने भैंसीपालक किसानलाई १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा पनि कार्यक्रममा गरे । अधिकारीका अनुसार वडा समितिले एकल महिला, असहाय र लामो समयदेखि पशुपालनको क्षेत्रमा लागेका किसानलाई प्राथमिकताको आधारमा भैसी वितरण गरेको छ ।
छुट भएका किसानका लागि आगामी वर्षको कार्यक्रममा समेटिने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार वडा कार्यालयमा आवेदन दिएका मध्ये छनोटमा परी अनुदानमा भैंसी प्राप्त गर्ने किसानले २० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी रकम नगरपालिकाले ब्योहोरेको छ । यसमा बिमाको रकमसमेत समावेश हुने अधिकारीले जानकारी दिए ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाले भैसी वितरण कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाबाट २१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने संघीय सरकारबाट पनि २१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा वडा नं. १० का लागि ५५, ९ मा ४०, ८ मा २५, ११ मा २० र १ मा १५ जना गरी १ सय ५५ जना किसानलाई १ सय ५५ वटा उन्नत जातका भैंसी वितरण गरिनेछ ।
नगरपालिकाले डेढ बर्ष उमेर पुगेका मुर्रा जातका भैंसी वितरण गरेको पशु शाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार भैंसी वितरण कार्यक्रमपछि आगामी वर्ष भैंसीलाई सुत्केरी भत्ताको व्यवस्थासमेत गरिनेछ । नमोबुद्ध नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाटै अभियानकै रुपमा पशुबीमा कार्यक्रमसमेत सुरु गरिसकेको छ ।
अहिलेसम्म वडा नं. १० मा ४ सय भन्दा बढी पशुको बिमा गरिसकिएको छ भने अहिले वडा नं. ९ मा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै वडा नं. ४ र ५ मा १ सय २५ वटा बाख्रा वितरणको कार्यसमेत गरिँदैछ । यसका लागि टेण्डर आह्वान भई खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।